Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha Mashiinka Mashiinka Mashiinka TONVA - Shiinaha Shiinaha
Mashiinkayaga wax lagu dubo ee dharbaaxo-duubista ayaa si ballaaran loogu adeegsadaa alaabada maalin kasta la isticmaalo, dhalada biyaha isboortiga, dhalada sunta cayayaanka, dhalada daawada, dhalada la isku qurxiyo, weelka wax lagu duubo ee cuntada, qeybaha alaabta guriga, qeybaha gawaarida, qalabka isboortiga, jiiriyada iyo caagag kale oo yar yar ama dhexdhexaad ah alaabta. Taageerada joogtada ah ee joogtada ahi waa aaladdayada adeegga ugu fiican. Marxalad kasta oo ka mid ah mashruucaaga, waxaan halkan u joognaa inaan ku siino talo farsamo. Ku qanacsanaantaada khibrada wax iibsiga ayaa noo ah qirasho weyn. Waxaan sidoo kale naga go'an inaan fulino wax soo saarkaaga waxsoosaarka sida ugu macquulsan iyada oo ujeedadu tahay iskaashi lagu guuleysto.
1. Moodelkan waxaa lagu gartaa wasakheyn la'aan, xawaare sare, xasillooni, keydinta tamarta iyo booska saxda ah ee ku qaadashada gawaarida. 2. Mashiinka waxaa lagu farsameeyaa iyada oo aan lahayn nidaam Haydarooliga laakiin nidaamka koontaroolada mootada gacanta ayaa loo qaatay in si dhaqso leh u saxo qaabka caaryada oo si dhaqso leh ula falgala. Sidaa darteed, bay'adda wax soo saar la'aanta-wasakhdu waxay si weyn u buuxisaa shuruudaha baakadaha dawooyinka. 3. Waxsoosaarka xawaaraha sare leh ee xasilloon wuxuu gaarayaa in ka badan toban kun oo kumbuyuutar maalintii. Iyo 40% tamar ayaa la keydin karaa marka la barbar dhigo nidaamka Haydarooliga. 4. Qaab dhismeedka gudaha ee dhawaan la qaabeeyey ee madaxa dhimashadu wuxuu si fiican u dammaanad qaadayaa caaga dhalaalaya inuu si toos ah u soo dego iyadoo aan lahayn weecasho. Khaladaadka culeyska waxaa lagu xakamayn karaa 0.1 garaam. 5. Heerka alaabooyinka dhicisoobay si wax ku ool ah ayaa hoos loogu dhigi karaa maadaama ay fududahay oo ay fududahay in wax laga barto hagaajinta mashiinka iyo hawlgalkiisa.
Qaab dhismeedka isku haynta 1.Toggle oo aan lahayn naqshad jiidan-usha ayaa leh xitaa xoog xoog leh oo isku haysa iyo saxan weyn oo saxan-hagaajin ah. Dhumucda gidaarka dhumucda dalool kasta ayaa la sameeyaa xitaa dusha sarena waa mid siman oo leh naqshadeynta madaxa dhimista quudinta, oo ay farsameyso xarunta mashiinka CNC. Qalabka haydarka 3.Well-si fiican loo qabtay, ee noocyada la soo dhoofiyo, hubi in mashiinku ku shaqeynayo stablv iyo si hufan. 4.MOOG 100 Points Nidaamiyaha Xakameynta Xakameynta ayaa la qaadan karaa si loo sii wanaajiyo tayada wax soo saarka. Qaabkan waxaa loo cusbooneysiin karaa "Nooc isku jira", gawaarida qeyb ka mid ah oo u socota oo loogu talagalay mootada adeegga si aan loo gaarin buuq, hawlgal fudud, boos sax ah iyo deg deg deg-deg ah oo ku saabsan caaryada. 6.Machine waxaa loo qaabeyn karaa robot amm, conveyor, leak tijaabiyaha, sumadda in-caaryada, mashiinka baakadaha, iwm sida aad looga baahan yahay.
1.Multi laver co-extrusion waa ikhtiyaari iyo socodsiiyaha socodka qaababka gaarka ah ee gudaha madaxa dhinta wuxuu helayaa dhumuc siman oo lakab kasta ah iyo dhumucda lakabka EVOH waxaa lagu xakameyn karaa gudaha 0.03mm. Qaab dhismeedka isku haynta 2.Toggle oo aan lahayn naqshad jiidan-usha ayaa leh xoog iyo xoog isku haysa iyo saxan weyn oo saxan-hagaajin ah. 3.Mashiinka waxaa lagu dari karaa nidaamka servo Haydarooliga, naqshadeynta xariiq muuqda, gacanta aaladaha, gudbiyaha, tijaabiyaha soo daadanaya, mashiinka baakadaha iyo wixii la mid ah. Qaabkan 4.This waxaa loo cusbooneysiin karaa "Nooc isku jira", gawaarida qeyb ka mid ah oo u socota oo loogu talagalay mootada adeegga si loo gaaro buuq la'aan, hawlgal fudud, boos sax ah iyo deg deg deg deg ah oo loogu talagalay caaryada.
Qaabkan waxaa lagu soo qaatay sida soo socota: madaxa dhinta badan, saldhig laba jeer iyo wax soo saar sare. Dhalada dhumucda dhalada ee dalool kasta ayaa la sameeyaa xitaa iyadoo qaabeynta madaxa dhimista quudinta xarunta, oo ay ka shaqeyso xarunta mashiinka CNC. 2.Makiinadu waxay isticmaashaa sumadda dibedda laga keenay ee loogu talagalay qaybaha hidda iyo waxay qaadataa laba waal oo saami ah si loo xakameeyo xawaaraha socodka iyo cadaadiska wareegga saliidda oo sidoo kale lagu maamuli karo khadka tooska ah. Dhaqdhaqaaqa kor ku xusan waa mid deggan oo siman. 3.MOOG 100 Qodob Nidaamiyaha Xakameynta Xakameynta ayaa la qaadan karaa si loo sii wanaajiyo tayada wax soo saarka. Qaabkan 4.This waxaa loo cusbooneysiin karaa "Nooc isku jira", gawaarida qeyb ka mid ah oo u socota oo loogu talagalay mootada adeegga si loo gaaro buuq la'aan, hawlgal fudud, boos sax ah iyo deg deg deg deg ah oo loogu talagalay caaryada. 5.Mashiinka waxaa loo qaabeyn karaa inuu ku shaqeeyo gacanta robotka, gudbiyaha, tijaabiyaha soo daadinta, sumadda caaryada ku jirta, mashiinka baakadaha, iwm sida aad u baahan tahay.